Wakiilka Lautaro Martínez oo war naxdin leh u sheegay taageerayaasha Barcelona – Gool FM
Wakiilka Lautaro Martínez oo war naxdin leh u sheegay taageerayaasha Barcelona
(Yurub) 01 Luulyo 2019. Wakiilka Lautaro Martínez xiddiga reer Argantina iyo kooxda Inter Milan ee Alberto Yaqué ayaa markii ugu horeysay ka hadlay mustaqbalka ciyaaryahanka iyo wararka la xiriirinayo Barcelona.
Warbaahinta Spanish-ka ah ayaa la xiriirisay magaca Lautaro Martínez maalmihii la soo dhaafay inuu u dhaqaaqayo kooxda Barcelona, kaddib markii uu wacdaro ka dhigay xulkiisa qaranka Argentina kulamada Copa America 2019 ee ka soconaya dalka Brazil.
Hadaba Alberto Yaqué oo ah wakiilka xiddiga kooxda Inter Milan ee Lautaro Martínez ayaa wareysi uu ku bixiyay “Passione Inter” ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan horeyba u maqlay maqaalkan, lakiin waxaan idiin xaqiijinayaa inay dhamaan yihiin warar xan ah”.
“Runta waxay tahay, inaan cidna nagala soo xiriirin saxiixa Lautaro Martínez, waa warar xan ah ee ku saabsan marxaladan”.
Wargeysyada qaar ayaa waxay sheegeen in Lionel Messi uu ka codsaday maamulka kooxda Barcelona inay aragti ugu laabtaan Lautaro Martínez, isla markaana ay lasoo saxiixdaan inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Wararka ugu waa weyn ciyaaraha Caawa & Heshiisyada dhacay saacadihii ugu dambeeyey... + SAWIRRO